USA oo joojisay xiriirkii ku salaysnaa taageerada Meleteriga ee ay siin jireen dowladda Masar – Radio Daljir
Agoosto 16, 2013 6:41 b 0
Washington, August 16, 2013 – Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama ayaa joojiyey taageeradii dhanka meleteriga ahayd ee ay siin jireen ciidanka Masar iyo wada-shaqeyntii Washintong iyo Qaahira, kadib xaalad xasaasi ah oo ka aloosan Masar.
Brack Obama wuxuu sheegay in ay ku dhawaaqayaan in ay joojiyeen taageeradii ay ciidanka siin jireen, taasi oo Maraykanku sheegay in uu sii wadayo markii ay meleterigu la wareegeen talada dalkaasi Masar, balse Obama ayaa talaabo ka baxsan bini?aadanimada ku tilmaamay weerarkii ay meleterigu ku qaadeen shacabka.
?Waan joojinay talaabadii aan ku doonayney in aan ku sii xoojino xiriirka iyo wada-shaqeynta inaga iyo dowladda Masar, si deg deg ah ayaan u joojinay maadama ay meleteriga Masar si bini?aadanimada ka baxsan ula dhaqmeen shacabka? ayuu yiri Obama
Meleteriga Masar ayaa balan ku qaaday in ay dhamaan bu-burin doonaan meelaha ay ku sugan yihiin taageerayaasha madaxweyinihii xilka laga tuuray Maxamed Mursi, hadalka madaxweynaha Maraykanka wuxuu ku beegan yahay maalmo kadib markii Masar lagu dilay 540 oo shacab mudahaaradayey ah.
Qaar kale oo ka mid ah dowladdaha caalamka ayaa dhaleeceeyey taalabada ay qaadeen meleteriga gacanta ku haya xukunka dalka Masar.